မသိသာသောခြားနားချက်များ - normal နှင့် ordinary ၊ sometime, sometimes နှင့် some time ၊ envy နှင့် jealousy - Myanmar Network
မသိသာသောခြားနားချက်များ - normal နှင့် ordinary ၊ sometime, sometimes နှင့် some time ၊ envy နှင့် jealousy
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on March 1, 2016 at 12:01 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Normal နှင့် Ordinary တို့၏ ခြားနားချက်
normal သုံးမလား၊ ordinary သုံးမလားဆိုတာ အသုံးပြုသော အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များမှာ အနက်တူစကားလုံး များအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သို့ရာတွင် ၄င်းတို့မှာ မသိသာသော ခြားနားချက်များတော့ရှိပါတယ်။ Normal က စံနှုန်းများ/သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာသော သဘောဆောင်ပါတယ်။ Ordinary မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား သိသာစေသော စရိုက်လက္ခaဏာများမရှိပါ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်/တစ်စုံတစ်ခုက အများကြားမှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် လုပ်ပေးမည့်အရာ ဘာမှမရှိပါ။
အမှန်တကယ်တော့ normal သည် '၀န်ကြီး' သော၊ အနှုတ်သဘောဆောင်နိုင်သော loaded စကားလုံးဖြစ်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ရှိသူများ (သို့) တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးသော သူများနှင့် အလုပ်လုပ်ရာမှာ ထိုစကားလုံးကို ရှောင်ပါတယ်။ Average (သို့) typical ကဲ့သို့သော ကြားနေစကားလုံးများကိုသာ အသုံးပြုပါတယ်။
Sometime, sometimes နှင့် some time တို့၏ ခြားနားချက်
Sometimes က 'တစ်ခါတစ်ရံ' လို့ ပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုရန် သင့်တော်သော စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
E.g. I sometimes think that life after death would be more beautiful. (သေပြီးနောက် ဘ၀က ပိုပြီးတော့လှပလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် တစ်ခါတစ်ရံ ထင်မိပါတယ်။)
Sometime ကတော့ 'လုပ်တော့လုပ်မယ် သို့သော် ဘယ်တော့လဲဆိုတာ မသေချာ' တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ 'တစ်ချိန်ချိန်' လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
E.g. I shall go to London sometime in the near future. (မကြာခင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် လန်ဒန်ကို သွားဦးမှာပါ။)
Some time က 'အချိန်နည်းနည်း' လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
E.g. Please give me some time. (ကျွန်တော့်ကို အချိန်နည်းနည်းလောက်ပေးပါ။)
Envy နှင့် Jealousy တို့၏ ခြားနားချက်
Envy ဆိုတာ တခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရာတစ်ခုခုကို သင်လိုချင် တပ်မက်တာကို ဖော်ပြရာ၌ အသုံးပြုရန် သင့်တော်သော စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
E.g. My neighbor looked at my new car with envy. (ကျွန်တော့်အိမ်နီးချင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ကားသစ်ကို လိုချင်တပ်မက်စွာ ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။)
Jealousy ကိုတော့ မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော အရာတစ်ခုခုကို ဆုံးရှုံးရမှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြရာ၌ အသုံးပြုပါတယ်။
E.g. I'm not jealous of my boyfriend; I trust him, and know he would never do anything to hurt me. (ကျွန်မ ရည်စားကို ကျွန်မ သ၀န်မတိုပါ။ သူ့ကို ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ နာကျင်အောင် သူ ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ်။)